खेल दौरान अनेकौं हर्कत गरेपछि लिजेन्ड म्याराडोनालाई सिधै अस्पताल लगियो
एजेन्सी । नाइजेरिया र अर्जेन्टिनाबीचको खेल चलिरहँदा अस्वभाविक हर्कत देखाएपछि फुटबल लिजेन्ड डिएगो म्याराडोनालाई खेलपछि सिधै अस्पताल लगिएको समाचार छ ।
नाइजेरियालाई हराउँदै अन्ततः अर्जेन्टिना पनि दोस्रो चरणमा
मंगलबार समुह चरणको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा नाइजेरियाविरुद्ध २-१ को जित निकालेर अर्जेन्टिना दोस्रो चरणमा पुग्न सफल भयो ।
आजको विश्वकपमा मेस्सीले गर्लान् त चमत्कार ? यी ज्योतिषहरुले गरेको भविष्यवाणी के होला ?
एजेन्सी । विश्वकपमा आज अर्जेन्टिना नाइजेरियाविरुद्ध उत्रिदैछ । यो खेल धेरै नै गोल अन्तरले जित्नै पर्ने बाध्यता अर्जेन्टिनालाई रहेको छ ।
मेस्सीकाे उद्घाेष : विश्वकप ट्रफी नउचालेसम्म विश्राम लिन्नँ
काठमाण्डौ । रुसमा जारी विश्वकपमा लगातार खराब प्रदर्शन गरिरहेका अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले विश्वकप नजितेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास नलिने बताएका छन् ।
यसकारण विशेष छन् लियोनल मेस्सी !
लियोन मेस्सी, इतिहासकै सवैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी हुन् भन्दा कुनै फरक नपर्ला । धेरै मानिसहरु मेस्सीको जेनेरेशनको सर्वोकृष्ट खेलाडीको रुपमा लिने गर्छन् ।
अर्जेन्टिनाको एफएलाई गाली गर्दै म्याराडोनाले भने ‘मलाई अर्जेन्टिनाका खेलाडी भेट्न दिनपर्यो’
एजेन्सी । अर्जेन्टिनाका फुटबल लिजेन्ड डिएगो म्यारोडोनाले आफूलाई नाइजेरियाको खेलअघि अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरुलाई भेट्न दिन अनुमति मागेका छन् ।
पछि हटे अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक, खेलाडी छनाेट र रणनीति तय अब मेस्सीले गर्ने
काठमाडौं । रुस विश्वकप २०१८ मा निरन्तर कमजोर प्रदर्शन गर्दै आइरहेको अजेन्टिनी टोलीको पहिलो चरणको अन्तिम खेलको लागि खेलाडी छनौटको जिम्मा प्रशिक्षक जर्ज साम्पाओली मात्र नदिने भएको छ ।